Ingbọ oloko dị elu | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
Gọvanọ Ayhan gara Sivas Ankara High Train Station Train; Gọvanọ Sivas Salih Ayhan na ndị nnọchianya nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara iji nyochaa ọrụ na-aga n'ihu na nke a na-eme atụmatụ na Sivas na iji nye ọrụ ọha na eze maka abamuru nke ụmụ amaala. [More ...]
Na-aga n'ihu Construction Projects Ịrịba Speed ​​Railway Lines na Turkey. Designrụ ọrụ iwu ụzọ ụgbọ oloko na-aga n'ihu n’ihu. Antalya-Eskişehir High Speed ​​Line Antalya bụ otu n'ime obodo kacha mkpa na Turkey n'ihe gbasara isi obodo ndị njem na ọrụ ugbo. [More ...]
Turkey si ọsọ na ot Railway Construction Projects; Na mgbakwunye na arụmọrụ okporo ụzọ ụgbọ elu, ụgbọ ala na-aga n'ihu ọsọ ọsọ na nke a na-aga n'ihu. Ewu nke uzo mbu di elu nke 1.480km na uzo ugboala nke 646 km [More ...]
Udiri Ankara YHT 13 ga-amalite na Jenụwarị; 13 na Ankara Disemba 2018 Ikpe nke onye ebubo ebubo 9, nke butere ọnwụ nke onye 10 na 13, ga-amalite na Jenụwarị 2020. 13 Na Disemba 2018 mere ụgbọ elu Ankara-Konya [More ...]
A ga-eji ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ dị mkpụmkpụ belata; Mmemme Kwa Afọ nke Onye isi oche nke 2020 gụnyere itinye ego na ụzọ ụgbọ elu, yana usoro ọmụmụ banyere High Train Train (YHT). Oke Ọgbara Ọhụrụ na Ministry of Transport, 2020 [More ...]
Ibelata '24 November' maka tiketi ụgbọ oloko na ibu nye ndị nkuzi; M. Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, ụbọchị ndị nkuzi 24 November n'ihi TCDD Transport Inc., 24-30 na Nọvemba jiri ụgbọ oloko dị elu (YHT) akara tiketi ụgbọ okporo ígwè dị larịị. [More ...]
Turkey Akwa Speed ​​Train Stations; Mgbe mmejuputa atumatu oru nke uzo di elu na Ankara-Istanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Bursa na Ankara-Izmir, ihe owuwu nke ụgbọ okporo ígwè nke NYT, nke di nkpa ka odi elu. [More ...]
Enwere ụgbọ oloko dị elu n'etiti oru ngo 10 a ga-ewu na Bursa; Söze… “are na-ekwusi ike na mmepe nke ụgbọ oloko na-agba, anyị na-agbasochi anya. Ka m nye gị ozi kacha ọhụrụ Gọọmentị Cumartesi na Satọdee na Mahadum Bahçeşehir dị na Merinos [More ...]
Intercity High Speed ​​Express Abia; Ministri Transportgbọ njem na ihe owuwu ga-ebido ịrụ ọrụ ọgbara ọhụrụ “Speed ​​Speed ​​Train (YHT)” nke dị na 2020 ma bido imepụta ihe ngosipụta n'okporo ụzọ YHT iji melite arụmọrụ. Dabere na akụkọ banyere Hürriyet Eray Görgülü; Ministry [More ...]
Akụkọ banyere ụzọ ụgbọ oloko bidoro ịrụ ọrụ na azụmaahịa na 1830; O kpughee usoro nke na - akpụzi ụwa nke ugbu a. Ọ bụrụ na anyị elee akụkọ banyere okporo ụzọ ụgbọ oloko n'ime ụwa, ọ ga - ekwe omume ịhụ nnukwu mmetụta ụwa. Mmepe nke netwọdi kachasị mkpa na Europe, mmetụta nke teknụzụ Britain, na India na [More ...]
N’oge ụgbọ okporo ígwè nke Ankara Istanbul: insgbọ elu nke elu-elu abanyela ndụ anyị, na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ma na-atọkwu ụtọ njem. Ntughari ihe omuma ya nile na ihe omuma nka n’ime TCDD [More ...]
Razọ Okporo ụzọ Dị elu na Map: Edirne, Tekirdag na Kirklareli ga-ejikọ aka na ọrụ ụgbọ elu 'High Speed ​​Train' abịawo na njedebe. Istanbul Halkalı ọdụ ụgbọ oloko dị na ọdụ Edirne Kapıkule ga-akwụsị na usoro ụgbọ oloko dị elu nke 229 kilomita, a gwara ndị bi na mpaghara ahụ, echiche ahụ [More ...]
Hypersensitive banyere Train High Speed ​​Train; Location ... Grand National Assembly nke Turkey gaa Commission nzute. Onye isi njikwa TCDD Kamuran Yazıcı nọ na nnukwu ọnụ ụlọ ya na osote ndị isi ya maka nzukọ ebe a ga-ahụ ihe ndekọ TCDD. Lee K Nzukọ a dịka onye otu SEE Commission AK Party Bursa Vice Dr .. [More ...]
Ahịa tiketi tiketi nke 2019 dị ugbu a Yọọ Mbetị na Times: insgbọ oloko dị elu nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ elu na-aga n'ihu na-ejikọ obodo, ndị njem na ọdịbendị dị iche iche. Njirimara njem dị iche iche na [More ...]
Anakwere Mkpesa Nsogbu An kura elu Ankara; Ngosiputa banyere onwu nke onye mmadu nke 9 na ihe mberede ebe 107 meruru ahu n'ihi ogbako nke ugbo elu di elu (YHT) na uzo ntuziaka na Ankara. [More ...]
Bursa High Speed ​​Mobilisation na Ankara! 'Bursa Kwesịrị'; Ndị omebe iwu Bursa kwadoro nzukọ ahụ nke Bursa Fan Club Association gbara na Ankara. AK Party osote onye isi akwukwo maka nzukọ a mere na CP Ankara Hotel [More ...]